DHAGAYSO:Madaxweyne meel aan la fileyn kaga soo baxay madaxda dowladd goboleedyada & C/weli Gaas oo….. – Puntlandtimes
DHAGAYSO:Madaxweyne meel aan la fileyn kaga soo baxay madaxda dowladd goboleedyada & C/weli Gaas oo…..
CADAADO(P-TIMES)- Madaxweynaha Maamulka Galmudug garabka magalada Cadaado ayaa eedeyn kulul waxa uu u jeediyay gollaha iskaashiga dowladd goboleedyada, isaga oo bar bar dhigay Al-Shabaab. RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO CODKA AXMED RAASTO
Isaga oo ka hadlayey shir ka dhacay magalada Cadaado ayuu sheegay in dalkan dhibaatada faraha badan ee ka jirta ay ku hayaan Al-Shabaab iyo gollaha iskaashiga dowladd goboleedyada.
“Soomaaliya waxaa caqabad ku ah Al-Shabaab, waxaa caqabad ku haaya gollaha sharta ah ee gollaha iskaashiga diidayana nasniino shacabka Soomaaliyeed helaan oo mar walba boobaya, runtii waxaan leenahay dhibaato ka weyn ma jirto gollahaas marka laga reebo Al-Shabaab” Ayuu yidhi Madaxweyne Baasto.
RIIX HALKAN OO KA DHAGAYSO CODKA AXMED RAASTO
Dilalkii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan goboladda Mudug iyo Galgaduud ayuu ku eedeeyay ina masuul ka yihiin gollaha iskaashiga oo uu sheegay in uu hogaaminayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.
Gaba gabadii waxa uu soo hadal qaaday shirkii Garoowe ugu qabsoomay iyo go’aankii ay ku gaareen inay ciidamo gaar ah samaystaan, waxaana uu sheegay in ciidamaas ay ku baaqeen ay durba bilaabeen dhibaatooyin cusub sida uu hadalka u dhigay.
Puntland waajib qaran ayaa ka saaran in ay gacan buuxda siiso dawlada la aqoonsayay ee Galmudug oo madaxweyn Xaaf hogaaminayo. Waa in ciidamada iskaashiga somaaliyeed ay si dagdag ah u hawl galaan oo Galmudug ka xoreeyaan sharwadayaasha xeebaha haysta iyo qawleysada vila xamar laga masruufo ee caasimada Galmudug haysata.
Gaas Puntland maaha Puntland Gaas maaha arintani gacan siin maaha ee Gaas baa wareeray oo ayaamahan Xaaf caashaqay. Farmaajona ku ximooobay.